Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) Soo-saareyaasha budada & Warshadaha
1-Testosterone budada waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu awooda badan ee anabolic ee suuqa maanta iyo kor u qaadista testosterone weyn iyo dhisaha muruqyada kaas oo kaa qaadi doona murqaha adag iyo kor u kordhay.
Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) budada (65-06-5) video
Root 1-Testosterone (Dihydroboldenone) budada (65-06-5) Description
Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) budada ama DHB ee gaaban, waa steroid anabolic taas oo ka duwan testosterone adoo haysta bond 1,2-double ah halkii xayn 4,5-double ee giraanta A. Aasaasiyad xoog leh oo leh sifooyin anabolic, Sababta ay caan u tahay dhexdhexaadiyeyaasha jirka iyo xiisaha fayaqabka waa xaqiiqda ah in ay leedahay qaar ka mid ah guryaha gaarka ah. Xaqiiqdii waa nooc ka soo jeeda maaddada 'Boldenone', kaas oo ah dabeecadda asrojiga. Waxay isku dayeysaa inay la jaanqaado saameynta testosterone. Maadaama ay tahay metabolitiga Boldenone laftiisa, waxaa sidoo kale loo yaqaan 4-Dihydroboldenone, oo ka sokow DHB iyo 1-testerone. waxaa si sharci ah loo iibiyey sida Maraykanka oo kale ah ilaa 2005, markii loo aqoonsaday daroogo III ah. Waxay leedahay kaalin sida wakiilka anabolic. Waa steroid anabolic, a 17beta-hydroxy steroid iyo 3-oxo-Delta (1) steroid. Qalabkan waxaa loogu talagalay cilmi-baarista iyo codsiyada raadinta.
Root 1-Testosterone (Dihydroboldenone) budada (65-06-5) Smamnuucista
Product Name Root 1-Testosterone (Dihydroboldenone) budada
Magaca Kiimikada 1-Testo; 1-T; δ1-Dihydrototestosterone; δ1-DHT;
barafku Psaliid 157-159 ° C
Storage Temperature Walxaha la kontoroolo, -20 ° C Qaboojiyaha
Application sida steroid anabolic anabolic
Muxuu yahay budada Xashiishka (Dihydroboldenone) (1-65-06)?
Daawada 1-Testosterone (budada dihydroboldenone), ama budada DHB ayaa gaaban, waa stabto anabolic oo keeneysa natiijooyinka tayada gaar ahaan kuwa jidhka, kuwa tartanka, iyo baaskiilada. Arrin xiiso leh, inkastoo xaqiiqda ah in magaca uu noqon karo jahwareer, ma jirto habka baaritaanka DHB. Xaqiiqdii, waa fududahay 5alpha qaabkeedu yar yahay ee Equipoise (boldenone), taas oo ka dhigaysa qaab gebi ahaanba ka duwan. Sidaa daraadeed, qaabka awoodda weyn ee DHB-ku wuxuu awood u siinayaa steroid si loo gaarsiiyo saameyno la isku halleyn karo oo waxtar leh waxyeellooyin yar. Awoodda iyo awoodda ay la socoto saameynta estrogenic ee hoos u dhaca ayaa ah faa'iidooyinka ugu horeeya ee lagu daro.
Sida Root 1-Testosterone (Dihydroboldenone) budada (65-06-5)
Budada DTH waa hoormoon dabiici ah oo ka dhacaya jirkaaga ka dib markaad isdifaacdo. Sida qaar ka mid ah steroids oo hal mar ah nidaamka jidhka u beddesho DTH iyo DHB, testosterone wuxuu u beddelaa estrogen iyo DTH. Daroogadu waxay leedahay saameyn yar oo hooseeya taas oo ka dhigaysa mid ku habboon jismiiyeyaasha xirfadleyda badan. Diixda Dihydroboldenone macnaheedu waa anabolic aad u macquul ah waxay awood u leedahay inay siiso muusikada caanaha ah ee cidda isticmaaleysa. Daroogadu ma kordhinayso sii-daynta biyaha ee muruqyada waxayna leedahay daroogooyinka aromatizing. Iyada oo ku xiran heerka isticmaalkaaga, dhakhtarku waa inuu ku hagaa adiga oo go'aamiya qiyaasta saxda ah. Si aad u noqoto mid amaan ah, baaritaan caafimaad waa in la sameeyaa ka hor iyo ka dib dhammaystirka wareegga koowaad. Jidhka bini'aadamka ayaa si kala duwan u falceliya mukhadaraadka si loo isticmaalo daawooyinka steroid, sidaas awgeed waa in la ilaaliyaa daaweynta caafimaad oo muhiim u ah natiijooyinka wanaagsan.
Root 1-Testosterone (Dihydroboldenone) budada (65-06-5) Qiyaasta
Waxaa ugu wanaagsan in la bilaabo ugu yaraan hal usbuuc qiyaasta 5-10 mg si aad u aragto mid ka mid ah jawaabta. Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala waxay arkaan noocaas oo kale si ay u noqdaan kuwa wax ku ool ah, halka kuwo kale ay dareemayaan qadarka ugu wanaagsan ee 20-40 mg. Waxay hoos ugu dhacdaa waayo aragnimada, yoolalka, iyo falcelinta shakhsi ahaaneed. Qaar badan ayaa hela qiyaas ka hooseeya si ay u noqdaan mid wax ku ool ah sida kan sare, laakiin leh saameyno yar. Iyada oo la adeegsanayo sida tan, guud ahaan waxa ugu wanaagsan in lagu khaldamo dhinaca digniinta, gaar ahaan kuwa aan khibrad u lahayn steroids. Inta badan waxay u muuqdaan inay helayaan qiyaasta ku habboon inay ku jiraan xadka 10-30. Wareegga wareegga waa in la dhigaa mid gaaban, inta u dhaxaysa toddobaadka 1-4. Ugu dambeyntii, waxaa si gaar ah muhiim u ah in la qaato wakhti ku filan ka dib marxalad kasta oo la socota walaxkan si uu u oggolaado jirku inuu soo kabsado.
Root 1-Testosterone (Dihydroboldenone) budada (65-06-5) Faa'iidooyinka
Inta badan Wax-soo-saarka Wanaagsan
Dhismaha xoogga leh ee xooggan iyo xooggan
Waxay kordhisaa gardarrada iyo faqriga
DHB waxay kicisaa koritaanka murqaha waxayna hagaajineysaa awoodda guud ee jidhka. Ciyaartoyda waxay qaataan steroids si ay uga caawiyaan inay dhisaan murqaha xooggan oo ay helaan awood ay ku tartamaan iyo sidoo kale inay si sax ah u shaqeeyaan. Laga soo bilaabo macmiilka dib u eegista meelaha kala duwan, DHB marna ma dhicin. Isticmaalayaasha intooda badan waxay kufaraxaan guushooda xirfaddooda cayaaraha daroogada.
Soo iibso 1-Testosterone (Dihydroboldenone) budada (65-06-5) ka Buyaas.com